ပလပ်များအကြောင်း သိကောင်းစရာ ~ လူဗိုလ် ဟူသည် ...
ယနေ့ခေတ်လမ်းပေါ်မှာ မောင်းနှင်သွားလာနေတဲ့ ကားတွေအတော်များများမှာ ပလပ်တွေကို အသုံးပြုထားပါတယ်။ သင့်ကားရဲ့ ပလပ်တွေကို သင့်တော်တဲ့အချိန်မှာ လဲလှယ်တပ်ဆင်တတ်ဖို့က ကားကို ကောင်းကောင်းအသုံးပြုနိုင်ဖို့အတွက် အရေးပါတဲ့ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ များသောအားဖြင့် ကားတွေမှာ သုံးတဲ့ ပလပ်တွေဟာ တန်ဖိုးသက်သာပြီး ကိုယ်တိုင်ပြောင်းလဲတပ်ဆင်ဖို့လည်း လွယ်ကူပါတယ်။
ပလပ်ဆိုတာ ဘာလဲ ?
ကားအင်ဂျင်မှာ တပ်ဆင်ထားတဲ့ ပလပ်တွေဟာ အင်ဂျင်အတွင်းမှာ လောင်စာဆီပေါက်ကွဲမှုဖြစ်စေတဲ့ ကိရိယာတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပလပ်တွေကို ဆိုင်လင်ဒါပုံစံ ပလပ်ခွက်တွေထဲကို ဦးစိုက်တပ်ဆင်ထားပြီး ပလပ်ခေါင်းတွေက လောင်စာဆီပေါက်ကွဲခန်း (Combustion Chamber)ထဲကို ထွက်နေပါတယ်။ ဒီပလပ်တွေကနေ မီးပွင့်စေပြီး လောင်စာဆီကိုလောင်ကျွမ်းပေါက်ကွဲစေကာ အင်ဂျင်ကိုလည်ပတ်နေစေတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပလပ်တစ်ခုဟာ သင့်ကားရဲ့ ignition coil ကနေ စွမ်းအင်ကိုယူပြီး combustion chamber အတွင်းက လေပေါက်အတွင်းမှာ မီးတောက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုမီးတောက်သွားစေတဲ့အတွက် ဆိုင်လင်ဒါတစ်ခုချင်းစီအတွင်းမှာ ရှိနေတဲ့ လောင်စာဆီနဲ့လေကိုလောင်ကျွမ်းပေါက်ကွဲသွားစေကာ အင်ဂျင်ကို လှုပ်ရှားလည်ပတ်စေပါတယ်။
ပလပ်တစ်ခုကို အီလက်ထရုတ်(Electrodes) တွေ၊ Resistor တွေ၊ နဲ့ပြုလုပ်ထားပြီး ကြွေရည်စိမ်လျှပ်ကာအတွင်းမှာ ထည့်သွင်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။
ဘာကြောင့် ပျက်စီးတတ်သလဲ ?
အီလက်ထရုတ်များ ယိုယွင်းခြင်း၊ ညစ်ပတ်ခြင်း၊ Resistor လောင်ကျွမ်းသွားခြင်း တို့ကြောင့် ပျက်စီးတတ်ပါတယ်။
ပျက်စီးသွားတဲ့လက္ခဏာတွေက ဘာတွေလဲ ?
အင်ဂျင်သတိပေးအချက်ပြမီးလင်းလာခြင်း၊ မီးမကူးသည့်အတွက် စက်နှိုးမရခြင်း၊ အင်ဂျင်လည်ပတ်မှု တုံ့ဆိုင်းခြင်း၊ အလွယ်တကူစက်မနိုးခြင်း တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
ပလပ်ပျက်စီးခြင်းကြောင့် ဘာတွေဖြစ်နိုင်သလဲ ?
လောင်စာဆီစားနှုန်းများခြင်း၊ အင်ဂျင်အဆွဲအရုန်းမကောင်းခြင်း၊ ဆိုင်လင်ဒါများပျက်စီးခြင်း၊ အင်ဂျင်ပျက်စီးခြင်းတို့ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။